Anthony Hopkins dia nanoritsoritra ny fomba fiasany amin'ny andian-dahatsoratra "World of the Wild West"
Ilay mpilalao sarimihetsika fanta-daza Anthony Hopkins, izay fantatry ny olona maro avy amin'ireo andraikitra maro tsy tambo isaina ireo mpanendrikendrika sy mpaneso, dia nesorina tao amin'ny andiany "World of the Wild West". Ny fiantsoana an'io anjara asa io dia tsy mety ny anarana iraisana, fa mifanohitra - azo atao izany. Momba ny fomba nanapahan'i Hopkins, 78 taona, ny asa sarotra toy izany, dia nilaza tamin'ny resadresaka nataony tamin'ny HELLO izy!
Ny tononkalo Sir Anthony dia nilaza momba ny toetra vaovao
Ny serasera "World of the Wild West" dia niseho tamin'ny serasera AMEDIA Premium vao haingana, saingy nanam-potoana handinihana ny maro. Hopkins dia milalao Ford, mpampianatra mahay iray, mpahay siansa afaka mamorona tontolo feno robot. Ankoatra izany, ny toetrany dia mirona amin'ny eritreritra filôzôfika, izay mahatonga azy ho olona mahaliana. Noho izany i Sir Anthony dia manasongadina ny Dr. Ford:
"Oloko tena mahery ny toetrako. Etsy an-danin'izany, eo anelanelan'izy ireo aho eo amin'ny fiainana sy ny vintana. Tiany ny mifehy ny zava-drehetra ary manaiky ny zava-drehetra amin'ny fitsipika tsy voasoratra, izay nahatonga azy ho tonga. Tsy sarotra amiko ny milalao, na dia tsy manavaka ahy aza ireo toetra ireo. Mandritra ny androm-piainako dia mandeha amin'ny fikoropahana aho, fa tsy manohitra indrindra. Tsy afaka mandray ny zava-drehetra aho, fa i Ford dia tena matotra foana. Izy dia perfectionistaista, ary raha misy amintsika, dia adala izy. Na dia misy aza ny fahasamihafana lehibe eo amintsika amin'ny tarehintsoratra dia nanome ahy mora ilay dokotera. Ny zavatra rehetra tokony ataoko eo anoloan'ny fakantsary dia ny milaza ireo karazan-javatra tsy misy dikany momba ny duality ny sain'olombelona. "
Ao anatin'ilay horonantsary, Anthony dia miteny betsaka, toy izao no nanehoan'ilay mpilalao ny anjara asany amin'ny anjara asany:
"Miresaka betsaka ny dokotera. Talohan'ny fitifirana, mila mianatra lahatsoratra marobe aho, nefa tiako izany. Tiako ny mampiofana ny fahatsiarovako. Tena ilaina aho amin'ny fahazazako. "
Hopkins dia nanaiky ny hilalao an'i Ford, satria nanolotra
Ankoatra ny toetra mahaliana ao Ford, ny mpikaroka dia liana tamin'ny fanontaniana mikasika ny zavatra nahasarika mpilalao sarimihetsika tao amin'ny "Tontolon'ny Wild West". Namaly valiny tsotra i Sir Anthony:
"Fantatrao, tezitra foana aho tamin'ireo fanontaniana: Nahoana ianao no manaiky ny hilalao amin'ny sarimihetsika na inona no liana amin'ilay sarimihetsika? Adala fotsiny izy ireo. Angamba handiso fanantenana anareo aho ankehitriny, saingy nanaiky ny hilalao an'i Ford, satria nomena io andraikitra io aho. Naharay antso avy amin'ny solontenako aho ary nanontany raha te hanao dokotera aho ao amin'ny andiam-pahitalavitra "World of the Wild West". Avy eo dia nieritreritra aho fa nandritra ny taona maro dia tsy niseho tao amin'ny fahitalavitra aho, ary ankoatra izany, karama tsara izany. Nanaiky aho. Tsy misy dikany ny fanapahan-kevitro. Tsy handainga aho fa hilalao ilay dokotera, satria toetra sarotra izany na te-hilalao foana. Satria tsy marina izany. Ford dia olona tena mahaliana, saingy tsy milalao azy aho. "
Kintana 20, izay nanana talenta tena izy ho an'ilay mpanakanto, ary tsy fantatray izany!
Ny fiainan'i Anton Yelchin
Ny endriky ny "Tandrefan'ny Tandrefana" Hopkins dia tsy mahafantatra
Maro ireo mpankafy fanta-daza momba ny robots no liana amin'ny fanontaniana mikasika ny hoe inona no hiafaran'ilay "Tontolon'ny Tandrefana", saingy tsy afaka namaly izany i Sir Anthony. Naneho hevitra momba ity toe-draharaha ity izy:
"Ny horonan-tsary dia tsy horonantsary, rehefa mamaky ilay scripty manontolo ianao ary fantatrao ny endrik'ilay sarimihetsika. Ity misy asa tena hafa. Izaho, tahaka ireo mpilalao hafa, dia nomena ny andian-tsarin'ny andiany manaraka alohan'ny fitifirana. Indraindray aho nanontany ny tale: "Inona ny raharaha? Nahoana no mitranga izany? Ary inona ny manaraka? ", Saingy izao no andian-tantara, fa tsy manome valiny ny fanontaniako izy ireo. Ary fantatrao, tiako ity mistery ity. Ny asa ao amin'ny "Tontolon'ny Tandrefana" dia feno tsy ampoizina, ary ny fahagagana dia lehibe foana. "
Alicia Vikander dia nilaza momba ny fitiavan'ny dihy sy ny lafiny mainty amin'ny indostrian'ny sarimihetsika
Nilaza i Jeri Halliwell fa niaraka tamin'i George Michael farany izy
Geri Halliwell dia niresaka momba ireo singa amin'ny fanambadiana sambatra sy ny faniriana hanana zaza hafa
Brian May dia namaritra ny fomba nanapotehan'i Freddie Mercury ny tongotra iray noho ny SIDA
Nitsangana i Cindy Crawford ho an'i Kayu Gerber zanany vavy talohan'ny famoizam-po ny tetikasa modely
Natalie Portman, ilay renim-pianakaviana, dia nitantara momba ny drafitra famoronana mifandraika amin'ny MCU
Mijery maso ny Visimitin
Ny tavy sira dia tsara sy ratsy
Karakarao ny fihinanan-kena amin'ny lohataona - toro-hevitra ho an'ny mpamboly hahazoana ny fandaniana farafahakeliny
18 Maty mahafatifaty nataon'i Heidi Klum ho an'ny Halloween
Masoandro voatabia voatabia - amin'ny sakafo, inona no manampy?
Salady rocket miaraka amin'ny kirany
26 tsara indrindra ny kitapom-batana amin'ny Halloween
Fametahana ny nify amin'ny ankizy
Famonoana zaza vao teraka
Ahoana ny fisafidianana ny fitsaboana ny zaza vao teraka?
Ireo karazana asa amin'ny psikology
Trano famakiam-boky ho an'ny trano fatoriana fahavaratra